गोसाइँकुण्ड यात्रानुभूति : बास दिनुअघि तीन माना चामल मागे
- प्रज्ज्वल चापागाईं
'आमा हो, लौन ! बुरुरु जुकाहरू टाउकोदेखि जीउभरि झरे । शरीर र सुरुवालभित्र पनि छिरे । कति जुकाले खाए, खाए । हे भगवान् ! बाटो नै देखिएन । ला ! अब के गर्ने होला ? रातभरि यही लेकाली वनमा हराइयो भने के गर्ने होला ? यतै मरिन्छ कि क्या हो ?'
प्रत्येक वर्ष जनैपूर्णिमामा लाग्ने गोसाइँकुण्ड जात्रा भर्न र यात्रा गर्न हजारौँ मानिसको घुइँचो लाग्छ । २०४८ सालको जनैपूर्णेमा पुग्नेगरी गोसाइँकुण्डतिर उक्लँदा सात सदस्यीय टोली वनमा हराएर १ घण्टा बेहाल भएको थियो । माथि आइलागेको आपत् त्यही बेलाको हो ।
दुई ब्याट्री जाने हातेबत्ती तीन जनासँग थियो । तर, तराईमा हुर्किएकाले ब्याट्री र हातेबत्तीलाई पनि लेक लाग्छ र ब्याट्री सकिन्छ भन्ने केही पत्तो थिएन । मान्छेलाई झैँ बत्तीलाई पनि लेक लाग्यो । चहकिलो बल्नुपर्ने तीनवटा हात्तेबत्ती अकस्मात् बिरामी जुनकिरीजस्तो पिलपिल गर्ने भएका थिए ।
बाटोभरि उज्यालो छर्नुपर्ने बत्तीले नै काम नगरेपछि रुनु न हाँस्नु भएका थियौँ । मेलम्चीबाट हिँडेको टोली तालामाराङ सकिएपछि कुटुङस्याङ भञ्ज्याङ पुग्न उकालो लागेको थियो । कुटुङस्याङ पुग्न झण्डै ४५ मिनेट बाँकी रहेको लेकाली वनमा हाम्रो टोली हराएको थियो । उकालोको दाहिनेतिर नलागेर बाटो भुलेकैले लेकाली वनमा पसिएको थियो । भुवन बजगाईं, तारा सापकोटा, राजेन्द्र सापकोटा, पुरुषोत्तम बजगाईं, चण्डिका बजगाईं, उजेली बजगाईं र यो पंक्तिकार त्यो घुमन्ते टोलीमा थिए ।
धमाधम आ-आफ्नाे शरीरमा जुका खोज्न थाल्यौँ । शरीरमा टाँसिएका जुका टिप्दै अँगेनामा हाल्दै, खरानी लगाउँदै गर्न थालेँ । जुकाले सबैभन्दा बढी कसको रगत चुसेको थियो । त्यो मैले बिर्सें तर यो पंक्तिकारको जीउमा ६३ वटा जुका छिरेका थिए । जुका झिक्दै अँगेनामा हाल्दै गर्दा गनेको थिएँ ।
टर्चलाइटले काम गरेन । जताततै चुक घोप्ट्याएझैँ अँध्यारो थियो । केही देखिँदैनथ्यो । अलिअलि जूनको उज्यालोले डोरेटो हो किजस्तो लाग्ने ठाउँमा टेक्दै हिँडेका हिँडै थियौँ । तर, यता जाने कि उता जाने, केही थाहा थिएन मरिजाम ।
पौने घण्टाजति वनमा हराइरहँदा निक्कै पर कताकता कुकुर भुकेको आवाज सुनिएको थियो । टोलीले त्यही कुकुरको आवाजलाई पछ्याउँदै हिँड्ने निधो गर्‍यो । अनुमानका भरमा चालेका पाइलाले हामीलाई सानो गोरेटोमा पुर्‍यायो । कुकुरको भुकाइ सुन्दै गोरेटो पहिलाउँदै जाँदा लेकाली गोठजस्तो देखिने घरको छेउमा पुग्यौँ । कहाँ हो ? कुन ठाउँ हो ? केही मेसो पाएका थिएनौँ । जेसुकै होस्, कुरा मिले त्यहीँ बास बस्ने निधो गर्‍यौँ । तर, घरमा मान्छे छन्, छैनन् थाहा थिएन । बास पाइने हो कि होइन ! त्यो पनि थाहा थिएन ।
'घरमा को हुनुहुन्छ ?', हामीमध्ये कसैले सोध्यो । भित्रबाट अधबैँसे आवाज आयो, ‘कहाँबाट आएको ? कता जाने हो ?’ त्यसपछि पंक्तिकारले भन्यो, ‘मेलम्चीबाट आएको । गोसाइँकुण्ड जान हिँडेको । बाटो भुल्यौँ । बास पाइन्छ त ?’
घरभित्र छिर्नुअघि नै घरबेटीले सर्त तेर्स्याए, ‘तीन माना चामल दिने भए मात्र बास दिन्छु ।’ हामीले सहर्ष स्वीकार गर्‍यौँ । थाकेर लखतरान परेका थियौँ । जीउभरि जुका पसेका थिए । चिसाे पनि सातै लाने थियो । सायद जुकाले नटोकेको हाम्रो शरीरको कुनै अङ्ग थिएन ।
सिउसिउ गर्दै घरभित्र छिर्‍यौँ । सानो घर । घरभित्र अधबैँसे उमेरका बुढाबुढी । त्यसमाथि हामी सात जना छिरेपछि त एकाएक घर धेरै साँघुरो भएको थियो । अँगेनामा आगो थियो । हामी सबै अँगेनावरिपरि र वरपर बस्यौँ । अब सबैको पिरलो जीउभरि छिरेका जुकाको थियो ।
धमाधम आ-आफ्नाे शरीरमा जुका खोज्न थाल्यौँ । शरीरमा टाँसिएका जुका टिप्दै अँगेनामा हाल्दै, खरानी लगाउँदै गर्न थालेँ । जुकाले सबैभन्दा बढी कसको रगत चुसेको थियो । त्यो मैले बिर्सें तर यो पंक्तिकारको जीउमा ६३ वटा जुका छिरेका थिए । जुका टिप्दै अँगेनामा हाल्दै गर्दा गनेको थिएँ । मधेसमा हुर्केर जुका थाहा पाएको मान्छेलाई लेकको जुकाले सातो लिँदो रहेछ भन्ने पहिलो अनुभव गरेको थिएँ । तर, लेकको जुका त्यसरी रुखबाट झरेर शरीरभित्र छिर्छ र चुस्छ भन्ने सुनेको चाहिँ थिएँ ।
काभ्रेको देउपुर नयाँगाउँबाटै गाेसाइँकुण्ड जात्रा भर्न जाने तयारी गरेर हाम्रो टोली हिँडेको थियो । त्यसैले बाटाेमा चाहिने चामल, घिउ, मरमसला, सबै थोक हाम्रो टोलीसँग थियो । पहिला तीन माना चामल बास दिने घरबेटीलाई दिएपछि अँगेनाे र अर्को चुलोमा हाम्रो खानेकुरा महिला टोलीले तयार पारेका थिए । जुकाको टोकाइ, वनमा हराएको त्रास र हिँडाइले लखतरान थियौँ । कति बेला सबै जना भुसुक्कै निदायौँ, पत्तै पाएनौँ ।
बिहान सखारै उठेर हाम्रो टोली हिँड्न ताउरमाउर गर्न थाल्यो । भदौ महिना भए पनि आकाश खुल्ला थियो । हरिया डाँडाकाँडा र खुलेको लाङटाङ, गणेश र गौरीशंकरलगायतका हिमालका दृश्यहरू यस्ता थिए कि हेर्दै सबैथोक छोडेर बाटाेमै अडिएर गीत गाउनु र नाच्नुजस्तो मनोहारी थिए । बाहिरको माहौल घमाइलो र रमाइलो हुने संकेत बिहानीले दिएको थियो ।
हिँड्दै जाँदा लगभग आधा घण्टा तेर्सैतेर्सो हिँडेपछि एउटा भनज्याङजस्तो देखा पर्‍यो । त्यो कुन ठाउँ होला भन्ने उत्सुकताले सबैलाई कुतकुत्यायो । अलिकति अगाडि पुगेपछि थाहा भएको थियो- कुटुङस्याङ भनज्याङ पो रहेछ । अघिल्लो रात बाटो भुलेकोमा सबै जना थकथक मान्दै थियौँ ।
एउटा सानो चमेनागृह रहेछ । टोलीका सबैले पंक्तिकारलाई 'सर' भनेर बोलाएको हुनाले चमेनागृह सञ्चालकले पनि 'सर' भनेर सम्बोधन गरेको सुन्नुपर्‍यो । सञ्चालकले सोधे, ’शेर्पाचिया खाने हो ?’ नाइँ भन्ने कुरै थिएन ।
पहिलो पटक शेर्पाचिया खाएपछि थाहा भयो- चियामा पनि नुन हालिँदो रहेछ । तर, चिसाे सिरेटो चलेको, लेकाली स्थल र अघिल्लो दिनको थकाइले गर्दा शेर्पाचिया हामी सबैले थपीथपी पियौँ । चौँरीको घिउ हालेर बनाएको शेर्पाचिया औधी मीठो हुनुका साथै त्यसले सबै थकानलाई भगाउने मात्र होइन, सिङ्गो शरीर नै ताजा भएको अनुभूति गरायो ।
मानेचौर, ठाडे र गुराँसको ठूलो वन छिचोल्दै घोप्टे भीर काटेर अगाडि बढ्दा लगभग १० घण्टा लगातार हिँडिसकेका थियौँ । मानेचौरमा भुवन बजगाईँ र पुरुषोत्तम बजगाईँ टोलीभन्दा निकै पछाडि हिँड्दै थिए । तिनताक यो पंक्तिकार झिल्के पानी खाने विचारको विरोधी थियो । लघु आशंका थियो- पछाडि लुकेर बजगाईं काका-भतिजले झिल्के पानी घुट्क्याए । त्यसरी लुकीलुकी झिल्के पानी खाएका बजगाईंजीहरू केही घण्टा मेरो छेउ आउनु भएन । अनुमान सही ठहरिएको थियो तर मैले पनि चाल नपाएजस्तो गरेको थिएँ ।
नाम त बिर्सिएँ । ठूलो झरनाबाट पानी छङछङ झर्दै थियो । उमेर, यात्राको रमाइलो र प्रकृतिप्रेमको योगफलले हामी बहुसंख्यक गीत गाउँदै नाच्दै थियौँ, ‘झरझरझर झर्ना झर्छ पाखा रन्काउँदै, फूलहरू फुलिदिन्छन् डाँडा रङ्गाउँदै’ र ‘डाँडैडाँडा फूलै पहरा फूलै पहरा ।' यस्तैयस्तै थिए गीतका दानाहरू । अरु पनि गाइएको थियो तर बिर्सिएँ ।
टोली झारसाँधी गएर बास बस्ने निधो भएको थियो । लौरीबिना डाँडाबाट नजिकै रहेको झारसाँधी दुवै लेक हुन् । दुवै लेकमा लेक लागेर मान्छे मर्न सक्छ र कतिपय मरेका पनि छन् । प्राचीनकालमा लेक लागेर जात्रालुलाई गाह्राे भएपछि त्यो स्थानमा झार साँधेर खुवाउँदा बिरामी सञ्चो हुने गरेकाले झारसाँधी नाम रहन गएको किंवदन्ती छ । हामी झम्के साँझमा झारसाँधी पुग्यौँ ।
झारसाँधीबाट १ घण्टा ओह्रालो झरेपछि पुगिने गाउँबाट आएर जात्रा अवधिभर चमेना र आवासको व्यापार गर्न जुटेको शेर्पाको युगल जोडी थियो । हाम्रो जात्रालु टोलीका सबैले सर भनेको सुनेर पसले शेर्पाजोडी दंग पर्‍यो । त्यति बेलासम्म त्यो गाउँमा शिक्षाको उज्यालो पुगेको थिएन । त्यसैले त्यो जोडीले मलाई अनुनय गर्ने शैलीमा भन्यो, 'सर, गोसाइँकुण्डबाट फर्केपछि हाम्रो गाउँमा मास्टर भएर बस्नुस् है ! हामी सबै गाउँले मिलेर सरको तलब दिऊँला ।’
यस्ताे अनपेक्षित प्रस्ताव सुनेर यो पंक्तिकार एकछिन अलमल परेको थियो । शिक्षाप्रतिको उनीहरूको भोक र चासोले नतमस्तक भएको थिएँ म । उक्त जोडीले भित्री मनदेखि नै प्रस्ताव राखेको भए पनि उनीहरूको हार्दिक अनुरोधलाई मौन रहेर अस्वीकार गर्न बाध्य भएको थिएँ । केटौले उमेर भए पनि मेरा आफ्नै योजना र सोचाइ थिए ।
प्राचीनकालमा लेक लागेर जात्रालुलाई गाह्राे भएपछि त्यो स्थानमा झार साँधेर खुवाउँदा बिरामी सञ्चो हुने गरेकाले झारसाँधी नाम रहन गएको किंवदन्ती छ । हामी झम्के साँझमा झारसाँधी पुग्यौँ ।
थकानले लखतरान परेका थियौँ । ताताे दाल, भात र तरकारी फटाफट खायौँ । ढिलो खाँदा चिसाेले तत्कालै चामल पल्टने र खानै नसक्ने गरी सबै थोक चिसाे हुने अवस्था थियो । यस किसिमको अनुभव जीवनमा पहिलो पटक गरेको थिएँ ।
जनैपूर्णिमाको दिन बिहान सखारै उठ्यौँ । धार्मिक अनुष्ठानप्रति केटाकेटीदेखि नै बेवास्ता गर्ने बानी लागेको थियो । जाडो चर्को थियो । बाटाेमा लसुन र टिम्मुर चपाउँदै अलिअलि ओरालो, तेर्सो र उकालो हिँड्यौँ । करिब १ घण्टा हिँडेपछि टोलीले लौरीबिनै भनज्याङमा पाइला हाल्यो । यो स्थल समुन्द्री सतहबाट ४ हजार ६ सय १० मिटरको उचाइमा रहेछ । त्यसपछि ताल र कुण्डहरू देखिए । भनिन्छ- यो क्षेत्रमा १ सय ८ वटा साना ठूला हिमताल छन् । पहिला सूर्यकुण्ड देखियो । हामी सबै यात्रा र जात्रा भर्नका लागि गन्तव्यमा पुग्नै लागेकोमा दङदास थियौँ ।
अलिअलि ओरालो र धेरै तेर्सो हिँडेपछि हामी गोसाइँकुण्ड पुग्यौँ । गोसाइँकुण्ड भने समुन्द्री सतहबाट ४ हजार ३ सय ८० मिटर उचाइमा रहेछ । बिहानको साढे ६ बजेको थियो । अब त्यो चिसाेमा हामी सबैले कुण्डमा तीन पटक टाउको डुबाउनुपर्ने र एक खल्को नुहाउनुपर्ने थियो ।
चिसाे अनुमान गर्दा पनि सातोपुत्लो गयो । तर, अरु मानिस पनि नुहाइरहेको देखेपछि आँट आयो । हतारहतार सातो लिने कुण्डको चिसाे पानीमा डुब्यौँ । जनै फेर्‍यौँ । यद्यपि जनैपुर्णेका दिनबाहेक मेरो काँधमा अघिपछि जनै हुँदैनथ्यो । गोसाइँकुण्ड मन्दिरको दर्शन गर्‍यौँ । मन्दिरको अलिक पर्तिर बनाइएको दालभात तरकारी र अचार घडीको सेकेण्ड सुई चलेजत्तिकै छिटो खायौँ । र, बिस्तारै गोसाइँकुण्डबाट ओरालो झर्न थाल्यौँ । उक्लिनु, ओर्लनु र फेरि चढ्नु त रहेछ जीवन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ८, २०७७, ०६:०३:००
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छौं : सरकारका प्रवक्ता विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छौं : सरकारका प्रवक्ता2min read
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बनायो प्रकाण्डको संयोजकत्वमा वार्ता टोली विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बनायो प्रकाण्डको संयोजकत्वमा वार्ता टोली2min read
प्रधानमन्त्री ओलीले भने- यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने ठानेको थिइनँ2min read
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छौं : सरकारका प्रवक्ता2min read
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बनायो प्रकाण्डको संयोजकत्वमा वार्ता टोली2min read